जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेवाला छैनौ :महन्थ ठाकुर
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताजे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेवाला छैनौ :महन्थ ठाकुर
Friday, 13 November 2015 16:27	Rate this item
मधेशी नेताभन्दा पहाडी नेताको घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ अध्यक्ष, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
तपाई त सरकार पक्षसँग औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता गर्दै आई रहनु भएको थियो तर अचानक वार्ता भंग भयो किन ?
मुख्य समस्या सिमांकनमा रहेको छ । सरकारी वार्ता टोलीले पनि भनि रहेका छन् कि समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौ, हामी पनि सविधान संशोधन गर्न तयार छौ । यहाँ संशोधन पनि दुई किसिमको छ । काँग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकालमा दुईटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । तर, यो प्रस्ताव मोर्चाको सहमतिमा नआएको कारणले विवादमा पर्यो । अर्कोतिर अहिलेका सरकारले पनि यो प्रस्ताव हाम्रो सहमतिमा आएको छैन भनेका छन् । अरु कुरा सिमांकनको विषयमा छलफल भइरहेको छ । रह्यो वार्ताको कुरा– वार्ता भंग भएको छैन । वार्ता अहिले पनि जारी छ । पहिला त्यतिकै वार्ता हुन्थ्यो । उताबाट काँग्रेसको मान्छे र यताबाट म आफै रहेर वार्ता छलफल गर्थे । पछि दुवैतर्फबाट वार्ता समिति गठन भयो । र, केही चरणमा वार्ता पनि भयो । तर यस पटक हामी उधारोमा वार्ता गर्न चाहदैनौ । हामीले नगदमा गर्न चाहन्छौ । सहमति गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र गर्ने होइन । सहमति भएका विषयलाई एकमुष्ट कार्यान्वयनमै ल्याउन चाहन्छौ ।
तपाई वार्ता भंग नभएको भन्नुहुन्छ तर सरकारले २२ गते बोलाएको वार्तामा तपाईहरुको पक्षबाट वार्ता भंग भयो भन्दै कोही पनि गएनन त ?
वार्ता भंग भएको होइन । कुरा के भएको छ भने सरकारी पक्षले वार्तामा पटक पटक गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गरेका छैन । कात्तिक १५ गते बसेको वार्तामा सरकारी पक्षबाट सकारात्मक कुराहरु भयो र त्यसमा यो पनि भनियो कि अबको वार्ता परिणामुखी हुनेछ र त्यसमा दलका शीर्षस्थ नेताहरुको उपस्थिति पूरै तयारीका साथ हुनेछ । राजनीतिक रुपमा नेतृत्व तहमा अनौपचारिक कुराकानी हुने र त्यसमा भएका सहमतिलाई फेरि वार्ता सहमतिमा ल्याएर औपचारिकता दिने कुरा भएको थियो तर यो बीचमा त्यस्तो कुनै छलफल र वार्ताहरु भएन । त्यही भएर मोर्चाका साथीहरु रिसाएका थिए र वार्ता जानु भएन ।
अब तपाईहरु कुन स्तरमा वार्ता गर्न चाहनु हुन्छ ?
हामी हरेकस्तरमा वार्ता गर्न तयार भएका छौ र गरिरहेका छौ पनि । पहिला जुन नेता भेट्न आउँथे ती सबैसँग हामीले छलफल र वार्ता गरकाछौे । पछि काँग्रेसले महेश आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए उहाँसँग पनि हामीले वार्ता गर्यौ । पछि, कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भयो उहाँहरुसँग पनि वार्ता गरकाछौे । अर्थात हामी जोसँग जुन स्तरमा पनि वार्ता गर्न तयार छौ । व्यापक सहमितिमा सविधान बनाउने कुरा थियो, त्यो भएन । त्यहाँ सहमतिलाई उल्लघंन गर्ने काम भएको छ । विगतमा भएका सहमतिहरुलाई पनि सविधानमा समावेश गराएनन् । अहिले पनि केही विग्रेका छैन । दलहरुको बीचमा सहमति होस् । सहमतिकै आधारमा हामीहरुसँग वार्ता होस्,र, मागलाई त्यसमा एड्रेस गरिायोस् । अहिले पनि हामीहरुसँग जुन सहमति हुन्छ ती सबै तीन दलकै सहमतिकै आधारमा हुन्छ । एमालेले मात्र गरेर हुँदैन अथवा वार्ता समितिका सदस्य कमल थापाले मात्र गरेर हुँदैन त्यसमा अरु दलहरुको पनि सहमति चाहिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका काँग्रेसको सहमति चाहिन्छ नै ।
यी तीन दलको कुराकानी सुन्दा र काँग्रेसको कुरा सुन्दा त सहमति होला जस्तो लाग्दैन त ?
हामीलाई पनि त्यस्तै लागि रहेको छ । तर, मधेशको समस्या समाधान त गर्नैपर्छ । समस्याबाट भागेर हुँदैन । मधेशको समस्या समाधान त आखिर गर्नैपर्छ, मधेशलाई त्यतिकै नै छाड्न मिल्दैन । संवैधानिक रुपमा सहमतिका लागि मुख्य दलहरुको बीचमा सहमति हुनैपर्छ तपाई त यी तीन दलका नेताहरुसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको छ, तपाईले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, सबैको मनोविज्ञान पनि थाह पाउनु भएको छ के लाग्छ यी तीन दलका बीचमा सहमति हुन्छ ?
हेर्नुस् सहमतिको विकल्प छैन । आज नभोली यी तीन दलको बीचमा सहमति हुनैपर्छ । यसअघि पनि उहाँहरुले आपसमा सहमति गरेर काम चलाउनु नै भएको छ । यत्रो माओवादी जनयुद्ध हुँदा पनि शान्ति सम्झौता भएकै हो । त्यसबेला पनि कठिनाई भएको थियो तर अन्ततः वार्ता भयो र सहमति पनि भयो । त्यसको तुलनामा अहिलेको समस्या केही पनि होइन । परस्थिति बदलिएको छ तर पात्रहरु तिनै हुन् ।
वार्ता सफल पार्नका लागि कम्पर्माइजको कुरा पनि हुन्छ तपाईहरु कहाँसम्म कम्प्रोमाइज गर्न सक्नु हुन्छ ?
हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने मधेशका कुनै पनि भाग पहाडको राज्यमा नमिलाइयोस् । उत्तर दक्षिण राज्य बनाएमा, एउटै राज्यमा हामी सबै रहन्छौ, मधेशी पनि हुन्छ, पहाडी पनि हुन्छ र हिमाली पनि हुन्छ भनि जुन राष्ट्रियताको कुरा उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ ती सबै तत्व मधेशमा छन् । मधेशमा हिमाली र पहाडी समुदायका मान्छेहरु छन्, आदिवासी, जनजाति, खस आर्यहरु पनि छन् । उनीहरुले आआफ्ना सँस्कृति अनुसार चाँडपर्व मनाई रहेका छन् । अर्थात मधेशको जस्तो विविधता हिमाल र पहाडमा छैन । उनीहरुको आफ्नो बोली, भाषा, व्यवहार र रहनसहन रहेको छ । तर पहाड अथवा हिमालको राज्यमा गएर खोज्नुस् त्यहाँ थारु पाउनु हुन्न । मधेशी पाउनु हुन्न । कोही कुनै जागिरका लागि गएर उतातिर बसेका होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर मधेशमा जसरी मिलेर बसेका छन्, त्यस्तो हिमाल र पहाडमा छैन । मधेशी जनता पहाडमा मिल्न चाहँदैनन् भने किन उनीहरुलाई जवर्जस्ती मिलाउन चाहेका छन् । मधेशीहरु त अलग देश मागि रहेका छैनन् । अलग भएर बस्न चाहेका छैनन् । यही देशमा आफ्नो अधिकार लिएर बस्न चाहन्छन् भने त्यसमा अरुलाई के को आपत्ति ?
शेरबहादुर देउवाले पनि एक पटक भन्नु भएको थियो कि राजमार्गको दक्षिण भाग मधेशमा राख्नुस् उत्तरको भाग पहाडमा दिनुस् हामीले मानेका थियौ । यदि राजमार्गका दक्षिणबेल्टका मान्छे मधेशमा रहन चाहँदैनन् भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहदैनौ । त्यस्तै चाँदनी दोधाराका जनता मधेशमा बस्न चाहँदैन भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहँदैनौ ।
तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो आन्दोलन भएको, अब यो कति लामो जान्छ ?
यो कुरा सरकारमा निर्भर हुन्छ । सरकारले के चाहन्छन् कस्तो चाहन्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो मागको सम्बोधन जति छिट्टो हुन्छ त्यति छिट्टो हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौ । यदि सरकारले बल प्रयोग गरेर वा दुई चार जनालाई मारेर आन्दोलनलाई दवाई दिन्छु भनि सोचेका छन् भने त्यो समय गइसकेको छ । त्यो अवस्था अब छैन । आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हामीलाई लखेटेर पठाइयोस् । जबर्जस्ती घरबाट निकालियोस् वा मधेशको आन्दोलन भारतले लगाएको हो भनि आरोप लगाइयोस् जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेबाला छैनौ । रुक्ने बाला छैनौ ।morcha
मधेशी र थारुको पहिचान हुने गरि मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नु भएको छ तर भोली कम्पर्माइजको कुरा आउँछ भने तपाईहरु कहाँ कहाँ कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ ?
हामीले त कम्प्रोमाइज गरेकै हो नि त । हामीले मधेशममा एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेश मागेका थियौं । पछि दुई प्रदेशमा झरेका छौ के यो कम्प्रोमाइज होइन ? राज्य पुनःसरचना आयोगले ल्याएको १० प्रदेशको प्रतिवेदन पनि हामी मान्न तयार छौ, के यो कम्पर्माइज होइन ? आयोगले चितवन, कञ्चनपुर र झापालाई पनि मधेशमै राखेका छन् । झापा, कञ्चनपुर र चितवनका जनताहरु भनि रहेका छन् हामीलाई नछाड्नुस् नत्र यिनीहरुले हामीलाई खतम गरि दिन्छन् । हामीले भनेका छौ कि हामीले दुई प्रदेशको कुरा गरिरहेका छौ । तपाईहरुलाई पूर्वमा बस्न मन लाग्छ भने पूर्वमा बस्नु होला, पश्चिममा बस्न मन लाग्छ भने पश्चिममा बस्नु होला, हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । यी पाँच जिल्लाका सबै भाग नभएपनि जुन भागमा मधेशीको बसोबास छ उनीहरु पहाडमा जान चाहँदैनन् भने हामीले कसरी छाड्न मिल्छ ? धेरै नभएपनि यी पाँच जिल्लाका मधेशी बसोबासको ठाउँलाई उहाँहरुले छाड्नै पर्छ भनेका थियौ । शेरबहादुर देउवाले पनि एक पटक भन्नु भएको थियो कि राजमार्गको दक्षिण भाग मधेशमा राख्नुस् उत्तरको भाग पहाडमा दिनुस् हामीले मानेका थियौ । यदि राजमार्गका दक्षिणबेल्टका मान्छे मधेशमा रहन चाहँदैनन् भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहदैनौ । त्यस्तै चाँदनी दोधाराका जनता मधेशमा बस्न चाहँदैन भने हामी जवर्जस्ती मिलाउन चाहँदैनौ । अहिले आएर यी सबै कुरालाई उहाँहरुले बिर्सिनु भएको छ । उहाँले आयोगको कुरा नमानेपछि हामीले कडा रुपमा अगाडि बढेका हौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आयोगको निर्णय मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न भने हामीले किन मान्ने ?
आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हामीलाई लखेटेर पठाइयोस् । जबर्जस्ती घरबाट निकालियोस् वा मधेशको आन्दोलन भारतले लगाएको हो भनि आरोप लगाइयोस् जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेबाला छैनौ । रुक्ने बाला छैनौ ।
यो कुरा सरकारमा निर्भर हुन्छ । सरकारले के चाहन्छन् कस्तो चाहन्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो मागको सम्बोधन जति छिट्टो हुन्छ त्यति छिट्टो हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौ । यदि सरकारले बल प्रयोग गरेर वा दुई चार जनालाई मारेर आन्दोलनलाई दवाई दिन्छु भनि सोचेका छन् भने त्यो समय गइसकेको छ । त्यो अवस्था अब छैन । आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हामीलाई लखेटेर पठाइयोस् । जबर्जस्ती घरबाट निकालियोस् वा मधेशको आन्दोलन भारतले लगाएको हो भनि आरोप लगाइयोस् जे गरेपनि हामी यसपटक झुक्नेबाला छैनौ । रुक्ने बाला छैनौ ।
अहिले भएको आन्दोलन भारतले गराएको आरोप राज्यले लगाएका छन् पनि यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो कुनै नौलो कुरा होइन । आजसम्म नेपालमा जुनसुकै आन्दोलन भएको छ, सबैमा भारतको हात रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा पनि भारतले आन्दोलन गराएको आरोप लगाइएको थियो । लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलन पनि भारतले गराएको हो भनि आरोप लगाएको थियो । अहिले मधेश आन्दोलन पनि भारतले गराएको हो भनि आरोप लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । मधेशी नेता वा मधेशी जनताभन्दा पहाडी नेता वा पहाडी जनताको घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ । यिनीहरु जति पनि तु तु मै मै गरे पनि भोली गएर एउटै थालमा खान्छन् दुवै । सविधान निर्माणको अन्तिमचरणमा भारतले कुनै पनि मधेशी नेतालाई बोलाएको छैन तर एक एक गरि सबै पहाडी नेतालाई भारतले दिल्लीमा बोलाएर कुराकानी गरेका छन् । उहाँहरुले के के कुरा गरेर आउनु भएको छ के के आश्वासन दिएर आउनु भएको छ उहाँहरुले नै जानुन् ।
यो नाकाबन्दी पनि भारतले नै लगाएको हो नि ?
यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ भने भारतबाट यतिका समानहरु कहाँबाट आइरहेका छन् । वीरगञ्ज नाका पूर्णरुपमा ठप्प छ तर अरु अरु नाकाबाट केही नकेही त समानहरु आइरहेका छन् त्यो कसरी सम्भव भयो । यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको भएको भए कुनै समान भारतबाट आउने सम्भावना हुँदैन्थ्यो । तपाई हेर्नुस् सबै नाकामा ट्रकहरु आएर जाम भएर बसेका छन् । यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको भए उतैबाट कुनै पनि समान पठाउदैन्थ्यो । मधेशी जनता सडक आन्दोलन गर्दा राज्यले गोलीले दवाउन खोजेका थिए । गोली चलाउन थालेपछि मधेशी जनता सीमातर्फ लागे । त्यहाँ गएर हेर्दा त यहाँ जाम गर्यो भने त्यसको असर राजधानीलाई पर्न सक्छ भनि सोचेर नै नाकाबन्दी शुरु भएको हो ।
भनिन्छ, मधेश आन्दोलनले गर्दा थुप्रै मधेशी तथा थारु शरणार्थी भएका छन् अहिले उनीहरुको अवस्था के छ ?
मधेश आन्दोलनले गर्दा थुप्रै मधेशी तथा थारुहरु शरणार्थी भएका छन् तर हालसम्म उनीहरुलाई शरणार्थीको दर्जा मिलेको छैन । शुरुमा यहाँबाट भागेर उतापट्टी गएकालाई त्यहीका स्थानीयले सहयोग गरेका थिए । तर, अहिले हामीले नै उनीहरुको व्यवस्था गरिरहेका छौ । शुरुमा जाँदा उनीहरुलाई त्यहाँका आफ्न्तहरुले सहयोग गरेका थिए तर पछि सहयोग हुन छाडेपछि उतापट्टी गएकाहरु दिल्ली, पञ्जाव, असामतिर कमाउन गएका छन् । टिकापुर घटना लिएर मात्र पाँच छ हजार थारु विस्थापित भएका छन् ।
भारत सरकारबाट उनीहरुलाई सहयोग भइरहेको छैन ?
भागेर गएकाहरु त्यहाँका डिएमसँग कुरा गरेका थिए शरणार्थीका लागि तर उहाँहरुले नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि अनुसार आउ जाउँ गर्न सकिन्छ रहन सकिन्छ तर शरणार्थीको व्यवस्था छैन भनि जवाफ दिनु भएको थियो ।
शरणार्थीको बारेमा वार्ताहरुमा कुरा उठेका छन् कि छैन् ?
प्रत्येक वार्तामा कुरा उठेका छन् । हामीले प्रत्येक वार्तामा मधेश आन्दोलनबाट विस्थापित भएकाहरुका बारेमा कुरा गरेका छौ । उहाँहरुले पनि यसबारेमा हामी गम्भीर छौ । विस्थापि भएकालाई फिर्ता बोलाउन,े मुद्दा फिर्ता लिने, थुना मुक्त गर्ने जस्ता काम हामीले गर्नेछौ भनेका थिए र अहिले पनि भन्छन् तर एउटा पनि काम गरेका छैनन् ।
कात्तिक १५ गते बसेको वार्तामा कमल थापाले मधेशी मोर्चाले राखेको पाँच बुँदे शर्तको बारेमा लिखित जानकारी गराएको विषय के हुन ? ती शर्त पूरा भएकै हो त ?
लिखित रुपले त दिएका छैन तर हुनसक्छ मन्त्रीपरिषद्बाट केही गरेका होला त्यसको बारेमा जानकारी गराएको हुनसक्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको होला तर कार्यान्वयन भएका छैन । मुद्दा फिर्ता भएको छैन । मृतक परिवारलाई १० लाख दिने कुरा थियो कुनै ठाउँमा दिएको छ तर अरु बाँकी नै छ । घाइतेलाई उपचार दिएको छैन । सेना फिर्ता लिएको छैन । आन्दोलनकारीलाई समात्ने र थुन्ने कार्य अहिले पनि भइरहेका छन् ।
त्यसो भए अहिले पनि वार्ताको वातावरण बनेको छैन ?
परिणामुखी वार्ताका लागि केही काम सरकारले गर्नै पथ्र्यो जुन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा जनतलाई विश्वास लागि रहेका छैन कि वार्ता हुन्छ । वार्ताबाट निकास निस्किन्छ भने कुरामा विश्वासै गरेका छैन । हामीले अघि सारेका केही कुराहरु कार्यान्वयन भयो भने अरुलाई पनि आशा जाग्छ कि अब वार्ता हुन्छ तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । तैपनि हामी वार्तामा गई नै रहेका छौ ।
त्यसो भए समस्या समाधानको कुनै सम्भावना देखिदैन ?
समस्या छ भने त्यसको समाधान केही न केही त निकल्नै पर्छ । समस्या मधेशमा मात्र होइन पहाडमा पनि छ । यो आन्दोलन पहाडबाट आएको हो । यो आन्दोलन पहाडमा पहिला शुरु भएको थियो । यो आन्दोलन अधिकारकार लागि मात्र होइन समाज परिवर्तनका लागि पनि भइरहेको छ ।	Read 884 times	Tweet
स्थानिय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा - बिक्रम बहादुर बम
अग्निपिडित परिवारलाई राहत बितरण
नरायणी उप(क्षेत्रीय अस्पतालमा नगद सहित खानेकुरा बितरण
वीरगञ्जको वडा नम्वर २१ को गाछीटोलमा भिषण अागलागी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई लक्षित गरि जिल्लाका बिभिन्न बिदालयहरुमा योग शिविर सुरु More in this category:
« वार्ता दिल्लीसँग होइन, हामीसँग गर्नुपर्छ : महन्थ ठाकुर अब रामचन्द्र र सिटौलाहरुको पछि लागदिन, भोलि नै आन्दोलनमा जान्छु-चौधरी »